Singles 'နေ့တွင်အလီဘာဘာအမြတ်ကြီးကြီးမားမားရရှိခဲ့သည် Androidsis
အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သောအလီဘာဘာသည်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည် Singles Day ရောင်းချမှု၏ပထမနာရီတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံနီးပါးရှိသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့သည်။ Jack Ma ဦး ဆောင်သော e-tailer သည်ရောင်းရငွေပွဲ၏တစ်နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၆.၉ ဘီလီယံ (သို့) ဒေါ်လာ ၉.၉၂ ဘီလီယံအတိအကျရောင်းရန်တင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Alibaba ၏တစ်ကိုယ်ရေနေ့ရောင်းချမှုမှယွမ် ၅၇ ဘီလီယံထက် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။
ရောင်းချခြင်း အလီဘာဘာတစ်ကိုယ်ရေနေ့ ပထမငါးမိနစ်တွင်ရောင်းရန်တင်ထားသည့်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်မှုမှဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံခန့်ရရှိခဲ့သည်ဟုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၄ နာရီရောင်းအားသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရောင်းအားဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ယခုနှစ်တွင် အလီဘာဘာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၁၈၀,၀၀၀ ရှိသည် ပြီးသား 24 နာရီအတွင်းရွေးချယ်ဖို့ဝယ်လက်များအတွက်။ Xiaomi နှင့် Apple တို့သည်ကန ဦး ရောင်းချမှုအဆင့်တွင်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမြို့ကြီးများဖြစ်သော Los Angeles, Frankfurt နှင့် Tokyo တို့မှအနှီးများမှစမတ်ဖုန်းအထိထုတ်ကုန်များကိုမှာယူသည်။
၎င်းသည်နိုဝင်ဘာလတွင်တည်ထောင်သူနှင့်ဥက္ကchairman္ဌဖြစ်သူ Jack Ma နှင့်အတူ Alibaba ၏နောက်ဆုံးအရောင်းပွဲဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်လက်ရှိစီအီးအိုကိုကြေငြာခဲ့သည်။ လာမည့်နှစ်တွင်သမ္မတရာထူးယူလိမ့်မည်.
ရောင်းအားတိုးတက်မှုသည်တည်ငြိမ်နေသော်လည်း Alibaba ၏ရှယ်ယာသည် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည် တရုတ်နှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်အကြားကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောစီးပွားရေးမရေရာမှုများကြားတွင်နှစ်နိုင်ငံသည်ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံရေးတွင်ကောင်းမွန်သောအချိန်များမရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » တစ်လအတွင်းမှာပဲ Alibaba ဟာအမြတ်ငွေဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံကို Singles's Day မှာတင်ခဲ့သည်